မှန်းစမ်း။ ဒီလူတွေ ဘာလုပ် နေကြတာ လဲလို့။ သေချာတာကတော့ ဆီဝေတယ် ဆန်ဝေတယ် ဆိုလို့ တန်းစီ နေကြ တာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှ သိတယ်ဗျာ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှာ မနက် ဝေလီဝေလင်းမှာ အခွန်ဆောင်ဖို့ နာမည်ရေးဖို့ တန်းစီ နေကြတာပါ။ ဘယ်သူက ဘယ်လို ရွှေဥာဏ်တော် စူးရှပြီး တီထွင် လိုက်တယ် မသိပါဘူးဗျာ။ မိုးမလင်းခင် အချိန်ကြီးကို လာရောက်တန်းစီ နိုင်ငံတော် အတွက် အခွန်အခ ထမ်းဆောင်ဖို့ ရွှေမြန်မာ တွေလောက် ၀ီရီယ ကောင်းတဲ့ သူတွေတော့ ကမ္ဘာမှာ ရှိမယ် မထင်ဘူးဗျာ။
အခွန်သွားဆောင်မယ် ဆိုကတည်းက အိမ်က ညီတော်မောင်တွေက အကြံပေးပါတယ်။ မနက် ၄ နာရီလောက်ထ။ ပြီးရင် တက္ကစီငှားပြီးသွား။ မနက်၅နာရီလောက်ဆိုရင် သံရုံးက အစောင့်တွေက နာမည်ရေးဖို့ စာရွက်ထုတ်ပေးတဲ့ အခါ စောင့်ပြီး ကိုယ့်နာမည်လေး ရေးခဲ့လိုက်။
မောင်လူအေးက ပြောသမျှ မယုံဘဲ ရှည်ကြောပြီး သွားပါတယ်။ မနက် ၅ နာရီခွဲလောက် အိမ်ကထွက် အစောဆုံးထွက်တဲ့ အမ်အာတီ တတိယ အစီးလောက် စီးတယ်။ အောချက် အမ်အာတီရောက်တော့ ၆နာရီလောက်။ တနေကုန် တနေခမ်း ပျားပန်းခတ်မျှ စဉ်တဲ့ အောချတ်လမ်းမကြီးတောင် အိပ်မောကျနေတုံး။ အောချတ် အမ်အာတီနား တ၀ိုက်မှာတော့ လူ တချို့တွေ့တယ်။ လျှောက်လာရင်း လျှောက်လာရင်း လူပြတ်လာလိုက်တာ စိန့်မာတင် နားရောက်တော့ လူတစ်ယောက်မှ မတွေ့။ ကိုယ်တိုင်တော့ ငါတော်တော်များ စောနေသလားပေါ့။
စိန့်မာတင် လမ်းထဲ လျှောက်၊ သံရုံးကို လှမ်းမြင်ရတော့မှပဲ လားလား။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ရောက်နေကြတယ် မသိ။ ရွှေတွေ ရွှေတွေ။ အားကြိုးမာန်တက် ဘယ်အချိန်ကတည်းကများ ရောက်နေကြတယ် မသိ။ သုတ်သုတ်သုတ်သုတ်နဲ့ လျှောက်သွားပြီး တန်းစီရတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ဘောပန် လေးကိုယ်စီနဲ့ တစ်နေရာစာ ရရှိရေး တန်းစီကြ၊ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့ ကိုယ့်နာမည်လေး ဖြည့်၊ အဖေနာမည်လေးရေး၊ ပတ်စပို့နံပတ်လေးရေး၊ စင်္ကာပူ လက်ရှိ နေရပ်လိပ်စာလေးရေး။ မောင်လူအေး ရေးရမဲ့ အလှည့်ရောက်လို့ ဖြည့်မယ် ဆိုပြီး အကြည့်။ လားလား။ ကိုယ့်ရှေ့က တန်းစီနေတာက လူ ၂၀ လောက် ကိုယ့်နာမည်ရောက်နေတာက ၅၀ ကျော်။ အပေါ်က ဘယ်သူတွေကများ ကိုယ်ရောင်ဖျောက် ကိုယ်တော်တွေ လာရေးထားကြတယ် မသိဘူးဗျာ။ နာမည်လေးတွေ ချည်းပဲ။ ပတ်စပို့နံပတ် မပါ။ အဖေနာမည် မဖြည့်ရသေး။ လိပ်စာက ကွက်လပ်နဲ့။
အော် ကိုရွှေမြန်မာတွေကတော့ ရောက်လေရာ နေရာလေးမှာ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်လေးတွေက အဲလို အဲလို ထိမ်းသိမ်းထားကြသေးပါလားလို့ပဲ ....
ကဲ စင်္ကာပူရောက် ကိုကိုရွှေတို့ မမရွှေတို့ရေ... အခွန်လေးများ ဆောင်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ... မနက်မိုးမလင်းခင် ၆ နာရီ မထိုးခင် သွားရောက် တန်းစီကြမှသာ သေချာမှာ ဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ တစ်နေ့ကို အခွန်ထမ်းဆောင်သူ ဦးရေ ၁၀၀ သာလျှင် လက်ခံ ဆော်ရွက်ပေးပါကြောင်း သိစေဖို့ ဝေမျှ လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
ရုံးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်က အရိုးထဲထိ စွဲနေတာပေါ့နော် သွပ်သွပ် မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်နော်
This is the worst thing I have ever encountered in my life. First we are paying tax to embassy even though there is tax treaty with SG Gov. Though we are paying tax, embassy still cant manage to adopt the efficient and convenient way for us. Its freaking ridiculous.
I’m impressed, I must say. Actually rarely do I encounterablog that’s both
educative and entertaining, and let me let you know, you
Feel free to surf to my webpage ... Yourlifestyles.org
I'm extremely impressed along with your writing skills as smartly as with the format in your
Here is my page; mails-world.com
Feel free to surf to my blog; penpalspoint.com
Also visit my web-site; groovaz.com